3:16 pm - Sunday January 21, 1759
Home » Archive by Category "Horyaallada"
Latest News on Horyaallada
Championship-ka Ingiriiska Oo Ka Daawash...
Championship-ka Ingiriiska Oo Ka Daawasho Batay Horyaallada Spain, Italy Iy...
Naadiyada heerka labaad ee Ingiriiska ayaa kaalinta 3aad ka galay horyaallada loogu daawashada badan yahay dunida xili ciyaareedkii dhamaaday ee 2016-17. Warbixin sannadle ah oo ay UEFA soo saarto, ayaa waxa lagu sheegay in Horyaalka Premier League ay hoggaaminaya daawashada, waxaana xili... read more »
Giggs Oo Loo Magacaabay Tabobaraha Xulka...
Giggs Oo Loo Magacaabay Tabobaraha Xulka Qaranka Wales
Halyeygii hore ee kooxda Manchester United, Ryan Giggs ayaa loo magacaabay tabobaraha cusub ee xulka qaranka Wales, waxaanu saxeexay heshiis afar sanadood ah. 44 jirkan baasha uga soo ciyaaray, isla xulka Wales iyo naadiga Man United, ayaa jagadan ka bedeli doona Chris Coleman, kaas oo shaqada uga... read more »
10 Ciyaaryahan Oo Leicester Ah Oo Fashil...
10 Ciyaaryahan Oo Leicester Ah Oo Fashiliyey Chelsea Iyo Khadkii Tabobare C...
Toban laacib oo Leicester ah ayaa wacdaro ku dhigay dhibicna kala hadhay kooxda kaalinta saddexaad ee Chelsea, iyadoo waliba xataa ay xaq u lahaayeen inay saddexda dhibcoodba kala soo huleelaan garoonka Stamford Bridge. Naadiga lagu naanayso Dacawooyinka ayaa guud ahaanba maamulka ciyaarta siday... read more »
More from Horyaallada
Championship-ka Ingiriiska Oo Ka Daawasho Batay Horyaallada Spain, Italy Iyo France
Naadiyada heerka labaad ee Ingiriiska ayaa kaalinta 3aad ka galay horyaallada loogu daawashada badan yahay dunida xili ciyaareedkii dhamaaday ee 2016-17. Warbixin sannadle ah oo ay UEFA... read more »
Halyeygii hore ee kooxda Manchester United, Ryan Giggs ayaa loo magacaabay tabobaraha cusub ee xulka qaranka Wales, waxaanu saxeexay heshiis afar sanadood ah. 44 jirkan baasha uga soo... read more »
Toban laacib oo Leicester ah ayaa wacdaro ku dhigay dhibicna kala hadhay kooxda kaalinta saddexaad ee Chelsea, iyadoo waliba xataa ay xaq u lahaayeen inay saddexda dhibcoodba kala soo... read more »